Airtel Madagascar: miantoka ireo tanora hiatrika fifaninanana any Mexico | NewsMada
Airtel Madagascar: miantoka ireo tanora hiatrika fifaninanana any Mexico
Lasa any Mexico, tohanan’ny Airtel Madagascar, ireo tanora dimy,i Milà,i Toky, i Kevin, i Tojo, tarihin’i Lalaniaina, hiatrika ny fifaninanana “First global challenge”, hitondra vahaolana amin’ny lafiny teknolojia avo lenta eo anivon’ny fiarahamonina ankehitriny.
Ny faran’ny herinandro teo, niainga teto an-tanindrazana ireo zatovo iantohan’ny Airtel Madagascar ireo, hamonjy ny fifaninanana any Mexico, Renivohitr’i Mexique, ny 15 sy 16 aogositra izao. Tanora avy amina firenena 175 ny handray anjara amin’izany ka haneho ny talentany koa ny Malagasy.
« Tsy mihemotra izahay amin’ny fampitaovana ny ekipa malagasy, ary faly izahay miantoka ny saran-dalan’ireo tanora marani-tsaina ireo, hitondra avo ny fanevan’i Madagasikara », hoy ny tale jeneralin’ny Airtel, i Maixent Bekangba.
« Fotoana iray io ho an’ny tanora maneran-tany hihoatra ny mahazatra azy, hihaina kolontsaina hafa sy hitondra ny anjara birikiny ho an’izao tontolo izao rahampitso. Manampy sy mankahery anay ny Airtel Madagascar amin’ny lafiny teknolojia iombonana manoloana ny olana mikiky ny fiainan’ny zanak’olombelona ankehitriny », hoy i Sahaza Marline, mpanazatra ireo ekipa malagasy, avy ao amin’ny ONG Habaka.